Haawwasi Oromoo Biyya ala jiru rakko Oromiyaa fi Oromoof fala barbaduufin dirqama.
Ijoo Dubbii GPO/OPC 04/03/2012
Oromiyya fi Oromoo rakko yoomi kami irra ilee hama ta’ee keessa jiru, Lafi Oromoo guguramee dhumee jira, dhaabbilee Oromoo biyya keessa jiran Miseensoon isaan hundi hidhaman jiru, Baratoon Oromoo University hunda keessa qabaman kan hidhaman kan mana barumsaa irra ariama jiru. Qatatee Bula Oromoo lafi irra fudhamee hojii dhabilee ta’ee Tigroota Gamoo gurgudaa ijaracha jiranf dhagga gura jira. Hojeetoon lammi Oromoo ta’aan Miseensaa TPLF ta’uu didan hojii irra ariaman jiru. Rakko Oromiyya keessa jiru irrati gadii fageenyan kan Mari'atan Baratoon Oromoo University 15 keessa jiran, Dhaabbilee Oromoo haalaa duree tokko malee tokkumaan Ummatan Oromoo fi Oromiyya Garbuma jala akka bassan Xaalayya Gummii Paarlama Oromooti malatoo waliin dhiyeefatan jiru. Haawwasi Oromoo biyya ala jiru ilee rakko Oromoon biyaa keessa irra jiru utuu beekuu nu irrati caalisuu hin qabu jeedhan iyyata isaan kara GPO/OPC dhiiyefatan jiru.
Gummiin Paarlamaa Oromoo rakko kana irrati hunda’uun Hayuulee Oromoo adunya kana irra jiran hundaaf wamicha goochuun marisisun rakkoo Baratoon Oromoo fi lammiin Oromoo biya keessa iyyachaa jiran kana Hayuulee Oromooti dhiyesee jira. Hayuuleen Oromoo Lammi isaan jeequmassa fi afaan fajii hamaa keessa jiru salphina akka bassan Gummiin Paarlamaa Oromoo Beektoota Oromoo gafatee fudhatama argachuun Beektoon Oromoo hundi Rakkoo Oromoo keessa jiru kan qoorachuun, maree adeemsisun, madda rakko kana beekun, furmata atatama itti lachuuf waan danda’an hunda gumachuun dirqama akka ta’ee fudhatan jiru.
Beektoon Oromoo rakkon Oromoo nu ilaalata dirqama lamuumatuu nu irra jira jeedhan gaafi saba isaanf deebi yaamuu latan kana Hawwassi Oromoo, Dhaabbilee Hawwassa Oromoo, Waldalee Amanta fi NGO jiru hundi Hayuun Oromoo rakkoo saba isaa iitidhaga’mee yamuu ka’uu Lammiin Oromoo hundi birra dhabachuun dirqama hunda keenyati.
Oromummaa fi Oromiyya kan Oromooti malee kan enyuu ilee miti. Amantan biyaa Europa fi Biya Arabati Oromiyati ergamee Oromoo gargarii qooduu hin qabu. Ganda Habshoon itiin nu qooqoodan Oromoon adda faca’uu hin qabu. Oromoo rakkon isaa Amanta ykn Gandan kan irraa ga’ee utuu hin tanee Oromummaa isaan waan ta’eef hundi Oromumamaf dhabachuu qabna. Amantan Kan dhunfatii Oromumman kan walooti. Diini keenya ijoolee Habasha kaleessa warii isaan Oromoo Harka, Harma fi Sala Muran lafa irra fixaa turan , goowaa nu goodhan akkumaa TPLF Abba Dulaa, Kuma, Kamal fi Hailu Gonfa yaabatani Oromiya galan, Ginbot 7 ilee Kamal, Hailu, Qasim fi Jundi yabatan Oromiyaa galuuf ESAT irrati dula Oromooo irrati labsa jiru. TPLF biyya bitaa jiru dhisan Oromoo ajeefama fi hidhama jiruu irrati dula banuun isaan maliif? Marii Oromoo deemsisuuuf Tarsimoo Haaraa qoopheesumuu keessati deebi argachuuf deema.
Ethiopia irraa kan Hafee Afrika , Europe , USA, Australia, New Zeeland, Kanada, biyoota fi Magaloota Oromoon jiratan hunda irraati, walgaii gugurgudan kan gegefamuu iti amanamee jira. Jaarsoolin Oromoo, Shamaran fi Dargagoon Oromoo Amnta fi gandan utuu wali hin qoonee bakka Oromoo 3 jiru Kasee biyaa hunda fi magala hunda keessati Marii adeemsuun lamii isaa biyya keessati dararama jiru Salphina basuun ama malee bori miti. Oromoon nu tokko, rakkon keenya tokko, biyyi keenya tokko, dhiggi keenya tokko, diini keenya tokko, Kayyoon keenya tokko insii Bilbilsuma Ummataa Oromooti. Oromoon Ummataa Rakkoo isaa Mariin furatuu Ummata seera fi safuu qabuu, Uumataa wal dhaga’uu dhaa kanafuu Ergamtooni diina Nu facasuuf Olola ishee Website fi Mannee diigumasa ijaratee irrati Ololtuu utuu hin dhagaiin bakka jirtuu Lammii kee salphina basiif waan dadneese gumachii